Ahoana ny fomba hahazoana mari-pahaizana Associate ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet 2022
2022 Vatsim-pianarana iraisam-pirenena sy eo an-toerana | Halalino ny tombontsoa any ivelany | Fanomezana sy vola ho an'ny fanabeazana |
Ahoana ny fomba hahazoana mari-pahaizana Associate ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet
Aprily 29, 2022 Justice Regis
Salama daholo izay mitady ny fomba hahazoana ny mari-pahaizana Associate ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, ato amin'ity lahatsoratra ity dia haka ny fotoanantsika isika amin'ny famongorana izay ilaina, raha azo atao ny mahazo diplaoma amin'ny 6 volana amin'ny Internet, raha tena ilaina tokoa izy ireo. ny olona handray anjara, ary ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet.
Tianay ny miantoka fa izay rehetra miditra amin'ity tranokala ity dia mahazo ny fampahalalana amin'ny ampahany mora levonina sy mora takarina, ary tsy ho hafa ity lahatsoratra ity, satria tianay ny mifikitra amin'ny fomban-drazana.
Ka ny torohevitray dia ny hipetrahanao, miala sasatra ary avelao izahay hitondra anao amin'ity fitsangatsanganana ity momba ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, ary manome toky anao izahay fa ho fitsangatsanganana mendrika izany.
Inona no atao hoe Degree Associate?
Azo atao ve ny mahazo diplaoma Associate ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet?
Mifanaraka ve ny programa momba ny mari-pahaizana an-tserasera?
Ny mari-pahaizana Associate 15 ambony ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet
2. Diplaoma Associate momba ny heloka bevava amin'ny Internet - Ashland University
3. Informatique Associate Degree Online – Franklin University.
4. Diplaoma Associate Accounting Online – Herzing University
5. Fitantanana vonjy maika Online Associate Degrees – Northeastern University
6. Politika momba ny tontolo iainana Online Associate Degree – American Public University
7. Ny mari-pahaizana anglisy amin'ny Internet Associate - University of the People
8. Finance Degrees Associate Online – Oniversiten'ny vahoaka
9. Degrees Associate amin'ny Fire Service - Anjerimanontolom-panjakana Lake Superior
10. Diplaoma Associate amin'ny fitantanana ara-pahasalamana an-tserasera - Coursera.org
11. Ny mari-pahaizana momba ny fahasalamana momba ny fahasalamana amin'ny Internet - Coursera.org
12. Diplaoma forensika / CSI Associate Online - International Forensic Institute (IFS)
13. Teknolojiam-baovao Associate Degrees Online - Keystone Online Studies
14. Diplaoma mpiara-miasa amin'ny Human Services Online - Sekoly John Hopkins Bloomberg momba ny fahasalamam-bahoaka
15. Psychology Associate Degrees Online - Atlantic International University
Ho an'ireo izay tena tsy mahalala, ny mari-pahaizana mpiara-miasa dia fandaharam-pianarana diplaoma izay omena amin'ny faran'ny fianarana aorian'ny fahavitan'ny fianarana ambaratonga faharoa aorian'ny mahafeno ny naoty takiana amin'ny fidirana, ny diplaoma mpiara-miasa dia miovaova amin'ny 6 volana ka hatramin'ny 2 taona momba ny fotoana hahavitan'ny fianarana izay nofaritan'ny andrim-panjakana miampy ny politikam-panjakana momba ny fanabeazana.
Ho an'ireo—tahaka ahy—izay liana tamin'ny fotoana nisehoan'izany voalohany, raha ny momba ny mari-pahaizana mpiara-miasa, dia nomena tany Royaume-Uni tamin'ny taona 1873 ny mari-pahaizana mpiara-miasa voalohany tamin'ny taona 1898 talohan'ny nahatongavany ho karazana evasive tany Etazonia tamin'ny Ny taona XNUMX, zavatra iray momba ny fiovan'ny mari-pahaizana associate any Etazonia dia ny any Etazonia, ny mari-pahaizana associate dia mety hamela ny fifindrana amin'ny taona fahatelo amin'ny mari-pahaizana licence.
Ny diplaoma mpiara-miasa dia nampidirina tany amin'ny firenena maro nandritra ny fotoana kelikely, firenena toa an'i Aostralia, Brezila ary Kanada, raha ny kaontinanta toa an'i Eoropa, Azia ary faritra sasany any Afrika.
Saingy miaraka amin'ny hatsaran'ny fifandraisana misy eo amin'ny solosaina antsoina hoe Internet, dia misokatra amin'ny tontolon'ny fahafaha-manao izay ahitana ny fianarana ny taranja rehetra na fitantanana, siansa, na zavakanto avy amin'ny faritra rehetra amin'ny tany raha mbola manana fahafahana ara-bola hamatsiana izany ny mpianatra.
Ho an'ireo mpianatra izay tena vonona ny hahafantatra ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, ny tranokalanay dia manana lahatsoratra mifandraika (miaraka amin'ny ankamaroan'izy ireo dia tsy fianarana amin'ny Internet) toy ny Sekoly ambony ao Houston TX mba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa amin'ny mpitsabo mpanampy.
Azonao atao koa ny mahazo diplaoma mpiara-miasa maimaim-poana amin'ny Internet, ary ho an'ireo izay maniry ny handroso eo amin'ny sehatry ny injeniera sivily, ny programa diplaoma an-tserasera 2 taona manolotra fahafahana hianatra amin'ny sehatry ny nofinofiny ireo mpianatra ho avy.
The programa mari-pahaizana momba ny fitantanana eo amin'ny sehatry ny fanorenana dia fandaharam-pianarana an-tserasera izay manolotra mari-pahaizana mpiara-miasa ho an'ny mpianatra sy ny olona te ho lasa mpihazona mari-pahaizana amin'io sehatra io.
Eny, azo atao ny mahazo mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, oniversite maro sy tranonkala famoahana loharanon-karena dia manana fandaharam-pianarana marobe izay ao anatin'ny 6 volana ny fahavitan'izy ireo.
Noho izany, mba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra napetraky ny andrim-panjakana ianao, mandalo ny fanadinana fidirana ilaina, ary avy eo dia mihetsiketsika amin'ny farany mba hamitana ny fizotry ny fisoratana anarana.
Raha mbola heverina ho fenitry ny fanakorontanana ny fivelomana eto amin'ity planeta ity ny mari-pahaizana momba ny fanabeazana, ary koa hanamarina ny maha-tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny olona iray amin'izay fotoana izay dia ny programam-pampianarana mpiara-miasa ary mety hisy fiantraikany amin'ny drafitra lehibe amin'ity zavatra ity. planeta.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny mari-pahaizana mpiara-miasa dia fandaharam-pianarana diplaoma izay avoaka rehefa vita ny fandaharam-pianarana, miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fidirana. Noho izany, ny mari-pahaizana mpiara-miasa dia programa undergraduate izay vita ao anatin'ny fe-potoana haingana kokoa noho ny programa an-tserasera mahazatra atolotra ao amin'ny andrim-pampianarana ambony nentim-paharazana.
Ny tombony amin'ny diplaoma mpiara-miasa dia ny fanombohana dia misy safidy mora toy ny programa momba ny mari-pahaizana sivily amin'ny Internet, tsy lazaina intsony dia taranja maîtrise miaraka amin'ny mari-pankasitrahana izay mifototra amin'ny aterineto sy maimaim-poana, ary ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena dia misy ihany koa fampianarana an-tserasera maimaim-poana miaraka amin'ny mari-pahaizana izay azon'izy ireo raisina avy amin'ny fampiononana ao an-tranony.
Ny mari-pahaizana Associate dia mitaky ny fahavitan'ny crédit 60, izay mety haharitra iray na telo taona vao vita. Ny fandaharam-potoana enim-bolana dia heverina ho haingana, ary isaky ny semester dia mila enta-mavesatra kokoa. Ny tapa-potoana dia faritana ho fandaharam-potoana telo taona.
Misafidiana asa amin'ny fanabeazana
Ny dingana voalohany dia ny mamantatra ny faritra mahaliana anao. Ny fitsaboana amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ny fitantanana orinasa ary ny fiarovana amin'ny cyber dia lohahevitra izay mitombo haingana ao amin'ny Intercostal Colleges.
Ny dingana manaraka dia ny hamaritana raha mifanaraka kokoa amin'ny filanao ny fianarana manokana na an-tserasera. Amin'ny alàlan'ny programa an-tserasera, mitombo ny isan'ny mpianatra mahazo fidirana amin'ny fianarana ambaratonga faharoa. Tsy mitaky famindran-toerana izy ireo, afaka miasa amin'ny fandaharam-potoana rehetra, ary azon'ny olona rehetra manana fifandraisana Internet!
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy ambony noho ny hafa. Na an-tserasera na any ivelany, ny oniversite sy ny tranonkala mamoaka taratasy fanamarinana dia miasa mafy mba hanomezana fampianarana feno. Ataon'izy ireo ihany koa fa ny mpianatra mandray anjara amin'ny fandaharan'asa an-tserasera dia mahazo ny loharano rehetra, toy ny Student Services sy ny fanampiana ara-bola.
Famitahana ny programanao
Mora ny mamita ny fisoratana anarana amin'ny programa. Eken'izy ireo fa mendrika ny hahazo fahafahana hanohy fianarana ambaratonga faharoa ny tsirairay. Tsy manantena ny mpianatra hanana GPA amin'ny lisea tonga lafatra izy ireo na lisitr'ireo zava-bita amin'ny resume.
Ny hany angatahin'izy ireo kosa dia ny fahatongavanao miaraka amin'ny fahavitrihana hianatra sy fahavononana hanitatra ny faravodilanitrao! Mba hivoahana amin'ny tongotra havanana, ny hany ilainao dia ny faharetana, ny fahalianana ary ny fahavononana.
Alohan'ny hahazoana ny mari-pahaizana mpiara-miasa aminao, dia takiana ianao hamita ireo fandaharam-pianarana mampiala voly sy azo ampiharina mandritra ny semester vitsivitsy. Ny anjara asa, ny fitaovana vakiana ary ny fitsapana tsindraindray dia ho anisan'izany. Tsy ho sahirana amin'ny fahazoana ny mari-pahaizana mpiara-miasa aminao ianao raha mifikitra amin'ireo andraikitra ireo.
Ato amin'ity fizarana ity dia hojerentsika be pitsiny ny mari-pahaizana 15 mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet; Hojerentsika ny zavatra ilainy, ny zavatra takiany (raha azo atao) ary ny fahatsapana ankapobeny momba ny mari-pahaizana sy ny toerana misy azy ireo amin'ny Internet.
Koa raha tsy maka be loatra amin'ny fandaharam-potoananao be atao, ireto ny mari-pahaizana 15 mifandraika amin'ny 6 volana amin'ny Internet satria tianay rehetra ny manatsara ny tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisan'ny solosaina.
Marihina fa ny mpandraharaha, ny sehatra ara-barotra ary ny mpitantana orinasa tsy ho ela dia samy niditra tamin'io sehatra io tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny mari-pahaizana momba ny fitantanana orinasa.
Ireo mpianatra izay mirotsaka amin'ny sehatry ny fitantanan-draharaha dia iharan'ny sehatra tena sarotra rehefa vita ny fandaharam-pianarana bakalorea an-tserasera; Ity fanamby ity dia mahatonga ny mpianatra ho mandalina kokoa, indrindra amin'ny fanapahan-kevitra, mamadika azy ireo ho famahana olana sy hery mamorona.
Ny Penn State World Campus dia andrim-panjakana tena tsara ary manome ny mpianatra ny fotoana mety hianarana Business Associate Degree Online, satria manana firaketana tsara izy ireo amin'ny fananana mpampianatra sy fitaovana enti-manana.
Ny mari-pahaizana Criminal Justice dia mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, ny tiako holazaina dia hoe mari-pahaizana mpiara-miasa izay azo tanterahina manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ao anatin'ny 6 volana ary atolotry ny Ashland University.
Ny mari-pahaizana momba ny heloka bevava dia manolotra tontolon'ny fahafahana ho an'ireo mpianatra izay nanapa-kevitra ny hiditra amin'ity sehatry ny fianarana ity, fahafahana tsy voafetra amin'ny fampiharana ny lalàna, psikolojia ary cybersecurity.
Ny mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet ho an'ny programa momba ny heloka bevava momba ny heloka bevava dia isan-karazany satria voafaritra manokana satria ny programa maro dia manome fahafahana ho an'ny mpianatra manokana amin'ny fianarana izay manomana haingana azy ireo amin'ny asa maro efa vonona aorian'ny fizarana diplaoma.
Ho an'ireo izay liana amin'ny mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet ary mikasa ny hiditra haingana amin'ny sehatra ara-teknolojia, ny safidy tsara indrindra amin'izany dia ny miditra amin'ny programa momba ny siansa informatika izay atolotra sy ampianarina amin'ny fenitra avo indrindra amin'ny Franklin University.
Araka ny voalazan'i Forbes, ireo nahazo diplaoma momba ny siansa informatika dia mety hahazo be indrindra avy hatrany aorian'ny fizarana diplaoma satria voalaza fa mahazo $ 59,000 isan-taona amin'ny salanisa.
Ilain'ny orinasa rehetra, tsy miankina amin'ny ekipan'ny kaonty izay ambony indrindra na farafaharatsiny mpanangom-bola manana fahaiza-manao tsara amin'ny famahana ny isa sy ny fandoavana ny mpivarotra amin'ny fotoana tokony hanaovana izany, izany no nahatonga ahy nampiditra ity sehatra manan-danja ity. momba ny fianarana amin'ny "fomba hahazoana diplaoma Associate ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet".
Ho an'ireo izay maniry ny hanongotra ny isa, hiasa amin'ny vola ary hanampy ireo fikambanana hahita ny fotoana sy ny olana mety hitranga, ny mari-pahaizana momba ny kaonty amin'ny Internet ao amin'ny Oniversite Herzing no tadiavinao ho lasa alika ambony.
Tsy fantatry ny olona maro fa ny mari-pahaizana momba ny fitantanana vonjy maika dia matetika tsy voatanisa eo ambanin'ny mari-pahaizana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana. Saingy mbola mitoetra ny zava-misy fa ny fahazoana bakalorea amin'ny fitantanana vonjy maika dia fantatra fa mahasoa indrindra ho an'ireo izay manentana ny hiasa ao anatin'ireo sampan-draharaham-panjakana maro eran-tany.
Noho izany, ireo izay te hahalala ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, maninona raha mankany amin'ny Oniversite Northeastern ianao ary mijery ny nofinofinao ho lasa zava-misy;
Ity programa atolotry ny American Public University ity dia amin'ny tanjona sy tanjona rehetra natao hifantohana amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny Mpandraharaha sy ny fandraharahana ataony amin'ireo masoivoho tantanin'ny governemanta izay ny tanjona farany dia ny miantoka ny fiarovana ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana.
Misy antony nampiako ity taranja tena manan-danja ity izay manolotra izany ho an'ireo izay mitady ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet, satria izy ireo dia diplaoma haingana izay manana taranja mifandraika amin'ny faharetana sy fitadiavana fomba hiatrehana izany. olana ara-tontolo iainana atrehin'ny planeta amin'izao fotoana izao.
Amin'ny ankapobeny, ireo programa momba ny mari-pahaizana ireo matetika dia mitaky vondrona crédit 120 izay miankina amin'ny oniversite sy ny manokana nofidinao. Koa maninona raha manao ny dingana manaraka ianao ary;
Manome fahafahana ny mpianatra hijery ny literatiora, ny mari-pahaizana anglisy amin'ny Internet natolotry ny Oniversiten'ny People dia toa lohahevitra midadasika manome lalana malalaka ho an'ny mpianatra ho lasa mpanoratra mamorona, mandalina filozofia, ary amin'ny ankapobeny, mianatra sarimihetsika sy fanoratana.
Maro tokoa ireo fanamby atrehin'ny fikambanana dia mora voavaha amin'ny alalan'ny fampiasana mpiasa sahaza ho an'ny asa, ka izany no mahatonga ny orinasa rehetra mendrika hanana ao anatin'ny laharany ireo mpiasa mahay eo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola, toy ny comptable, planner, mpandinika. , ary mpitantana.
Ho an'ity tanjona ity, ny programa momba ny mari-pahaizana momba ny famatsiam-bola an-tserasera natolotry ny University of the People izay tsy misy afa-tsy ho an'ireo izay mikasa ny hahazo mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet dia manome fahafahana tonga lafatra ho an'ny mpianatra ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny asa kasain'izy ireo hivoatra. ao anaty.
Fantatrao ny fahasahianao mitsambikina amin'ny toe-javatra mirehitra miaraka amin'ny tanjona tokana hamonjena aina sy fananana - raha azo atao - ireo mpamono afo dia tsy lasa fanilo ho an'ny herim-po sy fanompoana toy izany indray alina, ary tsy toetra nolovaina (tsara ny sasany) . Izy rehetra dia tsy maintsy nandalo ny fikosoham-bary tamin'ny mari-pahaizana momba ny afo isan-karazany izay misy — ary noho ny siansa maoderina — amin'ny Internet.
Ny fananana bakalorea amin'ny siansa momba ny afo natolotry ny Oniversiten'i Lake Superior State dia manome anao fahafahana hahatakatra ny zava-bitan'ny fitantanana maika, ny fitadiavana loza ary ny fomba fandrindrana haingana ny olona sy ny valiny. Ary koa, mampiharihary anao amin'ny teknolojia farany mifandraika amin'ny fisorohana sy ny famonoana afo.
Rehefa tao anatin'ny fifandraisana simbiosis amin'ny fampiharana ny lalàna ho an'Andriamanitra dia mahafantatra ny halavan'ny fotoana, ny mpianatra amin'ny sehatry ny siansa momba ny afo dia takiana amin'ny fianarana amin'ny fianarana lalàna sy fanadihadiana ihany koa. Ny hany tratra eto dia tsy vita ao anatin'ny 6 volana fa eo amin'ny 2 taona eo ho eo, mba hahafantarana bebe kokoa;
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny marary mila fikarakarana manokana, ny sehatry ny fitsaboana ankehitriny dia mila dokotera mahay, mpitsabo mpanampy ary mpitsabo hafa izay hikarakara amim-pahazotoana ny habetsahan'ny marary mameno ny hopitaly maneran-tany, ny vaovao tsara dia be dia be ny asa azon'ny mpitantana sy ny mpitantana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.
Ny sehatry ny fitantanan-draharaham-pahasalamana dia sehatra tsy mitsaha-mitombo miaraka amin'ny fanampian'ny firongatry ny teknolojia maoderina vaovao sy nohatsaraina fatratra, izany no antony ilana ny sehatry ny manam-pahaizana manokana sy fahaiza-manao vaovao bebe kokoa amin'ny fanatsarana ara-pitsaboana farany.
Ho anao eo amin'ny lahatsoratra momba ny fomba hahazoana mari-pahaizana mpiara-miasa ao anatin'ny 6 volana amin'ny Internet dia takatro fa te hahita ny fomba hahatongavanao ho tonga lafatra amin'ny sehatry ny fitsaboana aho, tsara dia manolotra anao ny mari-pahaizana momba ny siansa momba ny fahasalamana an-tserasera izay natao hanalana hetaheta.
Ity dia bakalorea izay manome ireo nahazo diplaoma ny fahafahana miditra amin'ny toeram-pitsaboana sy tsy klinika amin'ny sehatry ny fitsaboana tsirairay, saingy vao haingana ny ankamaroan'ny mpihazona ny mari-pahaizana bakalorea dia manohy manana ny fandaharam-potoan'ny tompony amin'ny sehatra toy ny fitsaboana amin'ny asa, fandalinana chiropractor, fitsaboana. informatika, atletisma, mpitsabo mpanampy ary andraikitra ara-pahasalamana hafa.
Nijery ny iray amin'ireo sarimihetsika mpitsongo/heloka bevava ireo ary naniry ny ho eny an-kianja miasa ho mpitsikilo heloka bevava mitady famantarana amin'ny famongorana an'io raharaha io? Eny, eo amin'ny lalana marina ianao tahaka ny ananako ho anao amin'ny mari-pahaizana mpiara-miasa azo tratrarina ao anatin'ny 6 volana eo amin'ny sehatry ny Forensics sy CSI degrees amin'ny Internet.
Ity bakalorea amin'ny siansa forensika atolotry ny International Forensic Institute (IFS) ity dia mampibaribary anao amin'ny sehatra midadasika toy ny cybersecurity sy ny fiarovana ny tambajotra izay miankina aminao avokoa ny sehatry ny specialization nofidinao.
Ny sehatra midadasika amin'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao dia mihatsara hatrany isaky ny evolisiona, tamin'ny andro taloha dia natokana ho an'ny mpitantana ny tambajotra sy ny injeniera amin'ny informatika, fa ankehitriny dia nivadika ho mpamorona tranonkala ary na dia ny mpamorona tranonkala aza.
Raha ny momba ny sehatry ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao dia zava-dehibe ny misafidy mari-pahaizana manokana amin'ny Internet izay tonga lafatra amin'ny fahaliananao sy ny tanjakao satria sehatra iray midadasika, midadasika be.
Ny sampan-draharaham-piarahamonina sy ny asa sosialy no ivon'ny mari-pahaizana momba ny serivisy maha-olombelona izay misy andraikitra ara-pitantanana sy toeran'ny fitsarana heloka bevava. Ny lehibe 10 dia manana fahafahana hanova izao tontolo izao ary ny asa sosialy dia anisan'ireo 10, ireo dia mazàna manintona olona maro hanova izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny famelana ny dian-tongony amin'ny toerana mety. Ity fandaharam-pianarana atolotry ny John Hopkins Bloomberg School of Public Health ity dia mifantoka indrindra amin'ny etika, fikarohana ary teoria.
Mitady programa izay manenika anao amin'ny fahalalana momba ny sosiolojia, anthropologie, fandalinana kolontsaina ary teoria psikolojia avy eo ny psikolojia natolotry ny Atlantic International University no notadiavinao tamin'ny mari-pahaizana mpiara-miasa tao anatin'ny 6 volana an-tserasera, izany dia manome fahatakarana ny mpianatra. momba ny teoria neuropsychology samihafa, psikolojia fampandrosoana ary siansa momba ny fitondran-tena.
Famintinana vaovao: Ahoana ny fanoratana famintinana
Ahoana ny fahazoana mari-pahaizana momba ny fitantanana risika amin'ny Internet
Ahoana ny fiarovana ny tenanao amin'ny hosoka amin'ny famandrihana hotely
Ahoana ny fomba fiomanana amin'ny fipetrahana ao amin'ny trano fatoriana
Ahoana ny fomba hahazoana mari-pankasitrahana amin'ny fitantanana tsy mitady tombony
4 Fandaharanasa fitaizana haingana any Carolina Atsimo
3 Fandaharana ho an'ny mpitsabo mpanampy any Utah
Programa mpitsabo mpanampy 9 ambony indrindra any Wisconsin
3 Fandaharana fitaizana haingana any Rhode Island
Fandaharam-pianarana 7 haingana any Pennsylvania
7 Fandaharana fitaizana haingana any Massachusetts
Mpanoratra ny votoatiny at Study Abroad Nations | Jereo ny lahatsoratro hafa
Regis dia mpanoratra manana fitiavana hitarika ny taranaka tanora amin'ny fanaovana safidy akademika tsara. Nanatevin-daharana ny SAN izy tamin'ny fiandohan'ny taona 2022 mba hanambatra hery miaraka amin'ny ekipanay mpamorona votoaty mahagaga mba hanome valiny amin'ireo fanontaniana maro an'ireo mpianatra mpamaky anay an'arivony.
Tia baolina kitra sy lalao video ary sarimihetsika koa izy.
8 Sekoly zavakanto tsara indrindra any New Jersey
Sekoly zavakanto 8 tsara indrindra any Frantsa
9 Sekoly zavakanto tsara indrindra any Arizona
Sekoly zavakanto 10 tsara indrindra any Philadelphia
mianatra an-tserasera Mianara fahaizana amin'ny Internet
Next Post:Quiz Baiboly 70+ ho an'ny ankizy misy valiny
Andramo serivisy fanoratana lahatsoratra nataon'i Writix hahazo fanampiana matihanina UK.